Tena Marina ve ny Evolisiona?
HAMAKY AMIN'NY TENY Abbey Abkazianina Abui Acholi Afrikaans Albaney Alemà Altaï Alur Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Asamey Attié Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bambara Baoulé Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Biak Bichlamar Bicol Boligara Boulou Bété Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuuk Cinamwanga Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Dayak Ngaju Digor Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Garifuna Gokana Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Guerze Guéré Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Isoko Italianina Japoney Javaney Jula Kabarde-Tcherkesse Kabiyè Kabuverdianu Kabyle Kachin Kamba Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabo) Kekchi Khana Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kissi Kongo Konkani (Romanina) Koreanina Kosrae Kreôla Maorisianina Kreôla any Belize Kreôla any Guinée-Bissau Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lamba Laosianina Lenje Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Marshall Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Miskito Mixe (Afovoany) Mixtèque (Guerrero) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Norvezianina Nsenga (Zambia) Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Sirilika) Palau Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Pendjabi (Shahmukhi) Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Poqomchi' Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Tena) Quiché Romanianina Rosianina Rotumien Runyankore Rutoro Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Rômania (Romania) Samoanina Sangir Sango Sena Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tandroy Tankarana Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanana Vietnamianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tongan Toraja Totonac Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Udmurt Umbundu Urhobo Uruund Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wixárika Wolaita Xhosa Yacouba Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Édo Éwé
Raha marina ny evolisiona, dia tsy nisy antony nampisy antsika fa velombelona fotsiny amin’izao isika. Raha marina kosa hoe nisy namorona isika, dia azo fantarina hoe inona no antony namoronana antsika, ary inona no hitranga any aoriana any.
Efa hatramin’izay i Alex no nino hoe misy Andriamanitra, ary izy no namorona an’izao rehetra izao. Izao anefa ny mpampianatra an-dry zareo milaza fa avy amin’ny evolisiona, hono, izao rehetra izao, izany hoe tsy nisy namorona fa nisy ho azy. Efa voaporofon’ny manam-pahaizana, hono, izany. Tsy te hino an’izany i Alex nefa matahotra sao dia lazain’ny olona fa vendrana. Hoy izy: ‘Ny manam-pahaizana izao mihitsy ve no efa mahita hoe marina ny evolisiona, dia izaho indray no handa an’izany?’
Inona no ho nataonao raha ianao no Alex? Hino ve ianao hoe marina ny evolisiona, satria izay no ampianarina any am-pianarana?
Rehefa miady hevitra momba ny evolisiona ny olona, na mino azy io izy na tsia, dia matetika no lazainy fotsiny hoe inona ny heviny, fa tsy fantany akory hoe nahoana izy no mino an’izany.
Misy olona mino fa nisy namorona izao rehetra izao, satria fotsiny hoe izay no nampianarina azy tany am-piangonana.
Misy indray mino ny evolisiona, satria fotsiny hoe izay no nampianarina azy tany am-pianarana.
FANONTANIANA TSARA HOERITRERETINA
Hoy ny Baiboly: “Nisy nanao ny trano rehetra, fa ilay nanao ny zava-drehetra kosa dia Andriamanitra.” (Hebreo 3:4) Marina ve izany?
Adala izay miteny hoe tsy nisy namorona izao rehetra izao, satria mitovy amin’ny olona mahita trano iray nefa milaza fa tsy nisy nanao ilay izy fa nisy ho azy teo
MISY MILAZA FA nisy zavatra nipoaka be tampoka, dia izay no nampisy an’izao rehetra izao.
1. Iza na inona no nahatonga an’ilay zavatra hipoaka?
2. Inona no hitanao hoe mitombina kokoa: Avy amin’ny tsy misy izao rehetra izao, sa nisy nanamboatra?
MISY MILAZA FA avy amin’ny biby ny olona.
3. Raha avy amin’ny biby ny olona, ohatra hoe avy amin’ny rajako, nahoana no tsy mitovy mihitsy ny fahaizan’ny olona sy ny rajako?
4. Nahoana no tena be pitsiny na dia ny zavamananaina lazaina fa faran’izay kely aza?
MISY MILAZA FA efa voaporofo ny evolisiona hoe marina.
5. Efa nanamarina an’ilay porofo mihitsy ve ilay olona nilaza an’izany?
6. Mba firy moa izao ny olona tena afaka milaza hoe marina ny evolisiona, sa mino an’izany fotsiny ry zareo satria nisy niteny taminy fa mino an’izany daholo ny manam-pahaizana?
“Raha mahita trano hazo tsara tarehy any anaty ala, ohatra, ianao dia tsy hieritreritra mihitsy hoe: ‘Tena nahay nilatsaka kosa ireto hazo ireto an! Tonga dia lasa trano ho azy teo ilay izy.’ Tsy mitombina tsinona izany. Koa maninona isika no hieritreritra hoe nisy ho azy teo izao rehetra izao?”—Julia.
“Eritrereto hoe nisy olona niteny taminao hoe nisy zavatra nipoaka tao amin’ny trano iray fanaovana pirinty, dia niparitaka eran’ny rindrina sy valindrihana ny ranomainty, dia avy eo lasa diksionera. Dia hino an’izany ve ianao?”—Gwen.
Hoy ny Baiboly: ‘Ampiasao ny sainareo.’ (Romanina 12:1) Tsy mety àry raha mino an’Andriamanitra ianao, satria fotsiny hoe...
IZAY NO AO AM-PONAO (Hoatran’ny tsapako fotsiny hoe misy Andriamanitra any ho any)
MINO AN’IZANY DAHOLO NY OLONA (Mpivavaka daholo ny olona atỳ aminay)
IZAY NO NAMPIANARINA ANAO (Efa izany no nitaizan’ny dadanay sy mamanay anay)
Mila manana porofo marina tsara kosa ianao hoe misy Andriamanitra.
“Rehefa manazava momba ny vatan’olombelona ny mpampianatra anay, dia tonga aho dia resy lahatra fa nisy namorona isika. Samy manana ny asany ny zava-drehetra ao amin’ny vatana, hatramin’ny lehibe indrindra ka hatramin’ny kely indrindra. Matetika aza no tsy tsapantsika akory ny fiasany. Mahagaga ilay izy!” —Teresa.
“Rehefa mahita tranobe aho, na sambo, na fiara, dia lasa saina hoe: ‘Mba iza àry no nanao an’itony?’ Olona mahay be, ohatra, vao mahavita fiara. Misy zavatra kely be dia be tsinona ao anatiny, sady tsy maintsy mety tsara daholo izy rehetra, izay vao mandeha ilay fiara. Dia raha ny fiara aza nisy nanao, mainka fa ny olombelona?”—Richard.
‘Arakaraka ny nianarako siansa no nahitako fa tsy marina ny evolisiona. Ny evolisiona amiko no sarotra inoana kokoa, noho ny hoe nisy namorona ny zava-drehetra.’—Anthony.
Efa ela ny mpahay siansa no nanao fikarohana momba ny evolisiona, nefa mbola tsy mitovy hevitra momba azy io foana. Ka raha ry zareo lazaina fa manam-pahaizana aza tsy mitovy hevitra, dia diso ve ianao raha tsy tena mino an’izany?
Izao no holazaiko, raha misy ankizy miteny amiko hoe ‘Izaho tsy mino an’izany Andriamanitra izany. Ary ianao?’:
Ilay video hoe Ny Hevitry ny Tanora toa Anao: Finoana An’Andriamanitra ao amin’ny www.jw.org/mg. (Jereo ao amin’ilay hoe FAMPIANARAN’NY BAIBOLY > TANORA)
Hizara Hizara Tena Marina ve ny Evolisiona?
Hizara Hizara Fanontaniana 10 Mahaliana ny Tanora